danna, Munyori paBikeHike
Zvinotora nguva yakareba sei kuti uwanezve kubva ku testosterone cycle? Vanenge vese varume vaive ne testosterone concentrations kudzokera kune yakajairwa mwedzi mitatu mushure mekupera kwekutenderera, uye
Inguva yakareba sei steroid yako yekutanga inofanira kuva? Kazhinji, vashandisi vanotora steroid kwemavhiki matanhatu kusvika 16 mavhiki panguva, inoteverwa nemavhiki akati wandei ekutora yakaderera dosi.
Mhinduro pfupi yekuti kana kuchovha bhasikoro kuchaita kuti makumbo ako ave akakura ndeye - kwete. Ehe, kuchovha bhasikoro kunovandudza mhasuru dzako dzemakumbo, asi sekurovedza muviri,
Hongu, Fitbits inogona kuronda kuchovha bhasikoro rako uchishandisa tekinoroji inonzi SmartTrack uye inobatsira zvikuru kune vanochovha mabhasikoro munzira dzakawanda. Chimwe chinhu chakasiyana chezvizhinji zveFitbit zvigadzirwa,